🥇 ▷ BlackBerry KEY2 gudaha Talyaaniga laga bilaabo 30-kii Luulyo laakiin durba waxay hor-u-yaallaan Amazon Italy ✅
BlackBerry KEY2 gudaha Talyaaniga laga bilaabo 30-kii Luulyo laakiin durba waxay hor-u-yaallaan Amazon Italy
BLACKBERRY KEY2 Waxaa laga heli karaa gudaha ITALY laga soo bilaabo 30 JULY: DIIWAANAHA KA SAMEEYA MAANTA Maanta
BlackBerry KEY2 waxay isku daraa dhamaan qeexida BlackBerry oo leh astaamo cusub, oo ay kujirto kamarad gadaal gadaal ah, keyboard xitaa xariif ah iyo koontarool qarsoon oo hagaagsan.
MILAN – 20 JULY 2018 – Telefishanka casriga ah ee BlackBerry® ee ugu horumarsan oo ilaa hadda soo galay Talyaaniga ayaa la heli doonaa laga bilaabo 30ka Luulyo. BlackBerry® KEY2 ayaa diyaar looga noqon doonaa amar-bixinta Amazon.it, laga bilaabo maanta oo Jimce ah 20-ka Luulyo. Oo lagu qalabeeyay iskutallaabta muuqaalka leh ee muuqaalka leh isla markaana lagu qalabeeyay astaannada asturnaanta iyo amniga ee ay soo saartay shirkadda BlackBerry Limited, taleefankan casriga ahi wuxuu leeyahay astaamo aan waligiis horay lagu arkin aaladda BlackBerry. Iyada oo leh nidaamka hawlgalka ee Android ™ 8.1 Oreo, BlackBerry KEY2 waa taleefanka ugu horreeya ee sumadda leh inay yeeshaan kamarad gadaal gadaal ah, halka Speed ​​Key, furaha gaagaaban, kuu oggolaanayo inaad isla markiiba gasho, oo leh dhaqdhaqaaq fudud, codsiyada, xiriirada iyo astaamaha inta badan loo adeegsado.
BlackBerry KEY2 ee nooca lacagta ah waxaa laga heli karaa amar-horaysi ah oo lagu soo rogay Amazon.it, qiime ahaan waa $ 649.90.
BlackBerry KEY2 ee nooca Madow waxaa laga heli karaa TIM laga bilaabo bishaan, labadaba macmiilka iyo liiska qiimaha ganacsiga.
Alain Lejeune, Madaxweyne Kuxigeenka Sare, Alain Lejeune, ayaa yidhi “Xitaa haddii maanta, ee macaamilka, doorashada qaababka casriga ah ay aad u ballaaran tahay, inta badan xalalka la soo jeediyay waxay u muuqdaan inay bixiyaan khibrado isticmaale oo aad u la mid ah, iyada oo aan kala duwanaansho badani jirin” of Isgaarsiinta TCL iyo Madaxweynaha BlackBerry Mobile. “Iyada oo leh BlackBerry KEY2, waxaan soo saarnay telefoon casri ah oo soo baxa, anagoo isku keenaya dhamaan astaamaha qaaska ah ee ka dhigay BlackBerry sumad summad leh isla markaana soo bandhigaya hal-abuurnimo taxane ah oo ka dhigaya mid ka mid ah aaladaha ugufiican xaga asturnaanta iyo amniga, iyo waliba BlackBerry casriga. horumarsan oo abid la soo saaray ”.
BlackBerry waxay horumarisaa taleefannada casriga ah ee Android ee ugu nabadgelyada badan adduunka. Waxaan u qaabaynay inay hubiyaan amniga heerarka oo dhan waana ku faraxsanahay inaan la wadaagno TCL Isgaarsiinta bilowga cusub ee BlackBerry KEY2, “ayuu yiri Alex Thurber, madaxweyne ku xigeenka sare iyo maareeyaha guud ee BlackBerry’s Mobility Solutions. “BlackBerry waxay sii waday inay kaamiliso qaabkeeda amniga taleefanka muddo tobanaan sano ah waana ku faraxsanahay inaan awood u yeelaneyno inaan ka dhigno taleefanka casriga ah ee casriga ah ee casriga ah BlackBerry mid ay heli karaan taageerayaasheena meel walba oo adduunka ah.”
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan BlackBerry KEY2 iyo amarro horudhac ah, booqo www.BlackBerryMobile.com.